धुलिखेललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नगरपालिका बनाउँछौं-अशोक व्याञ्जु - Nepalaynews
धुलिखेल नगरपालिकामा दोस्रो पटक मेयर पदका उम्मेदवार हुन्, अशोक ब्याञ्जु। देशभर २ सय ९३ वटा नगरपालिका छन्। सबैको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघको पनि अध्यक्ष हुन् उनी। काभ्रेको धुलिखेललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नगरपालिका बनाउन लागि परेका छन् उनी। ब्याञ्जुसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का सुरेन्द्र काफ्ले र रोजन तामाङले गरेको कुराकानी :-
तपाईं त धुलिखेल नगरपालिकामा पुनः उम्मेदवार हुनुभयो नि !
अघिल्लो कार्यकालमा धुलिखेललाई नमुना नगरपालिका बनाउन लागेको थिएँ। सबै काम पूरा गर्न बाँकी भएकाले पुनः उम्मेदवार भएको हुँ। पाँच वर्ष हामीले सम्रग विकासको आधारशीला तयार गरेका छौं। त्यसलाई पूर्णता दिन मेरो उम्मेदवारी हो।
अघिल्लो कार्यकालमा के–के काम गर्नुभयो त ?
पाँच वर्षको कार्यकालमा नमुना नगरपालिका बनाउने काम अगाडि बढाएका थियौं। हामी निर्वाचित हुनुपूर्व ६४ प्रतिशत घरमा शौचालय थिए, अहिले ९८ प्रतिशत घरमा शौचालय पुर्‍यायौं। ७१ प्रतिशत साक्षर थिए। अहिले ९८ प्रतिशत साक्षर बनायौं। साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिसकेका छौं। यो नगरपालिकालाई देशको छैटौं, प्रदेशको चौथो र काभ्रे जिल्लाको प्रथम बालमैत्री सहर घोषणा गरेका छौं। हामी आउनुपूर्व ३८ प्रतिशतको घरमा मात्रै खानेपानी पुगेको थियो। हामीले ठूलो संकल्प गर्‍यौं। खानेपानी सबैको घरमा पुर्‍याउने लक्ष्य लियौं। ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम ल्यायौं। ९८ प्रतिशत घरमा धारा पुर्‍याएका छौं। संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको दिगो विकास लक्ष्यमा चार आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण र खानेपानी छन्। दक्षिण एसियामै पहिलोपटक एसडीजी गोल सन् २०३० भित्रै पूरा गर्ने आधार तयार गरेको नगरपालिका हो धुलिखेल। एक वडा एक पार्क बनाउने अभियान थाल्यौं।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण हुने, सहरी सौन्दर्यकरण पनि हुने, बालबालिका, युवा, वृद्धवृद्धा पनि रमाउने भएकाले पार्कमा जोड दिएका हौं। ५३ वटा पार्क बनायौं।
भौतिक विकासमा के–के गर्नुभयो ?
सडक निर्माणलगायत पूर्वाधारका धेरै काम गरेका छौं। नगर सम्हाल्दा साढे १२ किलोमिटर कालोपत्रे थियो। पाँच वर्षपछि ४८ किलोमिटर पिच, ७१ किलोमिटर ग्राभेल र ३ सय २० किलोमिटर कच्ची मौसमी सडक बनाएर जनतालाई उपहार दिएका छौं। ५ किलोमिटर ढलान सडक बनायौं। गाउँबस्तीमा सबै टोलमा सडक सञ्जालले जोड्यौं। एक हजार क्षमताको सभाहल निर्माण गरेका छौं। एउटा सपिङ कम्प्लेक्स र ५ वटा स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गरेका छौं। १५ शय्याको अस्पताल र एक संग्रहालय बनाएका छौं।
शिक्षा क्षेत्रमा के गर्नुभएको छ ?
साक्षर घोषणाको कुरा भनिसकेँ। १८ वटा विद्यालय भवन निर्माण गरेका छौं, २ देखि १० करोडको लगानीमा। १७ वर्षदेखि मिलान नभएको शिक्षकको दरबन्दी मिलाएका छौं। विद्यालय मर्ज गरिएका छन्। आधारभूत विद्यालय तहमा जर्मनी पद्धति एमजीएमएल कार्यक्रम सञ्चालन गरी शिक्षामा सुधार गरिएको छ। धुलिखेल नगरस्थित दुई कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र आईसिटी ल्याब व्यवस्था गरेका छौं। शिक्षामा ठूलो परिवर्तन भएको छ।
अरू स्थानीय तहभन्दा धुलिखेल केमा फरक छ ?
विकास निर्माण फरक ढंगले गरेका छौं। विकास निर्माणका १ हजार १ सय काम गर्‍यौं। २३÷२४ वटा ठेक्का दिएका छौं। बाँकी सबै उपभोक्ता समितिमार्फत गरेका छौं। जनतालाई नै विकास निर्माणमा सहभागी गराएका छौं। जनतालाई सहभागी गराएर विकास गर्‍यौं।
के छन् तपाईंका भावी योजना ?
आगामी ५ वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण, खानेपानी र सरसफाइ, रोजगार, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण, पर्यटन, सुशासन क्षेत्रमा मानव अधिकारमा आधारित समावेशी, समतामूलक, न्यायपूर्ण र दिगो विकास गरी नेपालकै अग्रणी नमुना नगरपालिकाका रूपमा धुलिखेललाई स्थापित गर्नेछौं। सबै वडाका केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्नेछौं। चक्रपथ बनाउँछौं। विद्युतीय बस, बहुउद्देश्यीय बसपार्क, बिपी राजमार्गलाई नगरक्षेत्रमा ६ लेन, सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म आठ लेनमा विस्तारमा पहल गर्नेजस्ता काम गर्नेछौं। खानेपानीमा आत्मनिर्भर बनाउने छौं। अतिविपन्न परिवारलाई मासिक १० युनिटसम्म निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउँछौं।
सार्वजनिक स्थल र चोकमा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गर्नेछौं। धुलिखेल सुरक्षित, सुविधासम्पन्न र आकर्षक आवास केन्द्र र नमुना बस्तीका रूपमा विकास गर्नेछौं। एक वडा एक सुविधासम्पन्न खेलमैदान र धुलिखेल खेलमैदानलाई क्षेत्रीय रंगशालाका रूपमा विकास गर्नेछौं। फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ल्यान्डफिल्ड साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्नेछौं। सबै वडामा ढल निकासको निर्माण गरिने छ। अतिविपन्न गरिब परिवारलाई १० युनिट निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ।
धुलिखेललाई स्मार्टसिटी बनाउने भनिएको हो ?
धुलिखेललाई स्मार्टसिटीका रूपमा विकास गर्ने छौं। सार्वजनिक स्थलमा फ्रि वाईफाई इन्टरनेटको व्यवस्था गर्छौं। प्रशासनिक कार्यलाई कागजरहित बनाउने छौं। नगरभित्रका सबै चोक, गल्ली, सार्वजनिक स्थल, मन्दिर, पार्क, राजमार्गमा सीसीटिभीको विस्तार गर्नेछौं। धुलिखेललाई तरकारी, दूध, फलफूल, खाद्यान्न र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने छौं।
जित्ने आधारचाहिँ के–के छन् ?
अघिल्लो कार्यकालमा गरेका थुप्रै काम। जुन आमजनतासक्षम घामजस्तै छर्लङ छ। हाम्रो प्रतिबद्धतामा आगामी कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं। अतिविपन्न परिवारले बैंक खाता खोलेमा १ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ। धुलिखेलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई स्नातकसम्मको शिक्षा पूर्णनिःशुल्क गरिनेछ। अपांगता भएका नागरिकलाई स्नातकोत्तरसम्म अध्ययनका लागि निःशुल्क गरिनेछ। हामीले स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्य नागरिक जिम्मेवार स्थानीय सरकार भन्ने नाराका स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम नै ल्याउने छौं। समानतातर्फको महिला यात्रा, समाजवादउन्मुख धुलिखेल विशेषताअन्तर्गत एक घर एक स्वरोजगारी प्रत्याभूति गरिने छ। महिला, युवा, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, खेलाडी, कलाकार, बालबालिका क्षेत्र पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं। बंैक जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरैमा पुर्‍याउन व्यवस्था गरिने छ। खुसी ज्येष्ठ नागरिक, सुखी बालबालिका, आपांगतामैत्री धुलिखेल नगरपालिका भन्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछौं।
अरू पनि छन् कि ?
अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गर्ने नीति लागू गर्नेछौं। सुरक्षित सहर हाम्रो प्रतिबद्धता हो। चेलीबेटी बेचबिखन, बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा, यातना, संगठित अपराध, बालविवाह, लंैगिक हिसा, यौनजन्य हिंसालगायतका दुव्र्यवहार अन्त्य गरिनेछ। एक वडा एक विशेषता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं। माउन्टेन स्पोर्टस्, बौद्ध अध्ययन केन्द्र, कृषि अध्ययन केन्द्र बनाउने छौं। वडा नम्बर २ लाई दुग्ध, तरकारी, फलफूल उत्पादन पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। वडा नम्बर ३ लाई पर्यटन, तरकारी र बिउबिजन उत्पादन पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर ४ शैक्षिक केन्द्र तथा व्यवस्थित सहरीकरण क्षेत्र, वडा नम्बर ५ मा सांस्कृतिक र सम्पदा तथा आवासीय क्षेत्र, वडा नम्बर ६ र ७ लाई पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण, संस्कृति, पुरानो मौलिक बस्ती संरक्षण, व्यावसायिक केन्द्र तथा आवासीय क्षेत्रको विकास गरिनेछ। वडा नम्बर ८ लाई पर्यापर्यटन, पार्क, होमस्टे, कृषि तथा कृषि अध्ययन केन्द्र बनाइने छ। वडा नम्बर ९ मा पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, आवासीय तथा कृषि क्षेत्र, वडा नम्बर १० मा औद्योगिक, कृषि तथा फलफूल पकेट क्षेत्र बनाइने छ। वडा नम्बर ११ पर्यटन, होमस्टे कृषि तथा जैविक विविधता क्षेत्र र वडा नम्बर १२ लाई धान खेती, सुन्तला खेती, पर्यटन र सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ।
एकातिर गठबन्धन छ, एमाले पनि फुटेको छ। कसरी सजिलै जित्न सक्नु हुन्छ ?
पाँच वर्ष जनताको सेवा गरेका छौं। यहाँ फुटको खासै असर छैन। जति फुटेर गएका छन्, त्योभन्दा धेरै आएका छन्।
चुनावमा केही नयाँ संकल्प गर्नुभएको छ ?
हामी जनप्रतिनिधि शासक होइनौं। जनताका सेवक भएर काम गर्नेछौं। सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता भएर काम गर्छौं। नगर सुशासनको नमुना बनाउँछौं। भ्रष्टाचार गर्दैनौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि गर्छौं।
जनताले तपाईंलाई नै किन भोट हाल्ने ?
हाम्रो पार्टी एमालेको विचार सबै सही छन्। पाँच वर्षमा जनमुखी सरकारको दृष्टान्त प्रस्तुत गरिसकेका छौं। हरेक आन्दोलनको अगुवाई हाम्रो पार्टीले गरेको छ। एमाले शान्ति प्रक्रियाको पहलकर्ता पनि हो। राज्य निर्माण र समृद्ध नेपालको सपना एमालेसँग छ। प्रगतिशील राष्ट्रवादको अगुवाई गरेको पार्टी पनि एमाले नै हो।
नगरपालिका संघको अध्यक्ष हुनुभयो। स्थानीय तहको पहिलो पाँच वर्षलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
स्थानीय तहको पहिलो अभ्यास हो यो पाँच वर्ष। देशभरकै स्थानीय तहले विकासको जग बसालेका छन्। जनशक्ति व्यवस्थापन र संविधानले व्यवस्था गरेको एकल अधिकार क्षेत्रहरूमा कानुनी संरचना (ऐन, कानुन) निर्माण गरी विधि निर्माण गर्ने पहिलो दायित्व थियो। कानुनी जटिलताबीच सेवा र सुशासन दिन सफल भएका छौं। आँगनबाटै जनतालाई सेवा प्रवाह गरेका छौं। कोरोना संक्रमणका दुई वर्षका बाबजुद काम भएका छन्।
साभार :- अन्नपूर्ण पोस्ट
प्रकाशित मिति: २५ वैशाख २०७९, आइतवार २१:१६ बजे